Horudhac: Chelsea vs Leeds United… (The Blues oo si ku meel gaar ah u qaban karta caawa hoggaanka horyaalka Premier League) – Gool FM
(London) 05 Dis 2020. Illaa iyo taageerayaal gaaraya 2,000 oo qof ayaa caawa loo ogolaan doonaa inay soo fariistaan garoonka Stamford Bridge marka ay Chelsea la ciyaareyso kulankeedii ugu horreeyay Premier League naadiga Leeds United tan iyo bishii May ee sanadkii 2004.
Blues macallinkeeda Frank Lampard ayaa horraan la soo kulmay Leeds isagoo macallin ah muddadii uu ka shaqeynayay kooxda Derby County, waxaana haddii uu caawa guul ka gaaro kulankan ay ka dhigan tahay inay Chelsea si ku meel gaar ah u sii fariisan doonto hoggaanka Premier League.
Taariikhda: Sabti 05 Dis 2020
Tababaraha Chelsea ee Frank Lampard ayaa la filayaa inuu Olivier Giroud ku soo billaabo kulankiisii ugu horreeyay ee horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan kaddib afartii gool ee uu ka dhaliyay kooxda Sevilla kulankii Champions League-ga ee Arbacadii.
Lampard ayaa sidoo kale sheegay inuu heysto saf dhammeystiran kulankan, iyadoo aysan jirin xiddigo ganaax, dhaawacyo ama siyaabo kale ku seegi doona kulankan.
Diego Llorente ayaa taam u ah kulankan kooxda Leeds United, balse Macallin Marcelo Bielsa ayaa tibaaxay inuu xiddigan soo ciyaari doono kulan ay 23-sano jirrada kooxdan ciyaareyso ka hor inta uusan kooxda waa weyn u safan kulankiisa ugu horreeyay kaddib dhaawaciisa.
Pablo Hernandez, Jamie Shackleton iyo Adam Forshaw ayaa dhammaantood ciyaartan seegaya.
>- Ciyaartii ugu dambeysay ee labadan koox ku dhex marta horyaalka Ingiriiska waxay dhacday bishii May ee sanadkii 2004, waxaana xilligaas ay Chelsea ku adkaatay hal gool oo uu madaxa ku dhaliyay Jesper Gronkjaer ciyaartii ugu dambeysay ee xukunkii Macallin Claudio Ranieri.
>- Leeds ayaa guul ka qaadatay Chelsea kaliya labo kulan 12 jeer oo ay booqdeen Stamford Bridge ciyaaraha Premier League, waxaana ugu dambeysay inay Galbeedka London guul ka qaataan 19 bishii December ee sanadkii 1999, markaasoo uu labada gool u dhaliyay Stephen McPhail.
>- Blues ayaa guuleysatay 82% kulammada ay garoonkeeda kula ciyaarto kooxaha markaas ka soo dallacay heerka labaad, waana kooxda ugu rikoorka wanaagsan kooxaha horyaalka Ingiriiska ka ciyaara wax ka badan hal xilli ciyaareed.
>- Chelsea waa guuldarro la’aan siddeed ciyaarood oo horyaalka ah, waxaana ka rikoor wanaagsan kaliya Tottenham xilli ciyaareedkan marka la eego kulammada ugu badan ee ay koox guuldarro la’aan ahaato fasal ciyaareedkan horyaalka Premier League.
>- Chelsea ayaa markii ugu horreysay sameyn karta kulankii saddexaad oo xiriir ah oo ay shabaqooda gool ka ilaashadaan ciyaaraha Premier League tan iyo December 2017 xilligaas oo ay afar kulan oo xiriir ah shabaqooda difaacdeen.
>- Kooxda uu hoggaamiyo Frank Lampard ayaa dhalisay 22 gool oo Premier League ah xilli ciyaareedkan, waana kooxda ugu goolasha badan fasalkan, iyagoo la siman difaacdayaasha horyaalka ee Liverpool.
>- Kulammada ay Leeds ciyaarto Premier League waxaa la isku tuuray 289 darbo, waxayna ka badan tahay dhammaan kooxaha kale, waxaana ay tuureen 153 darbo iyagoo ah kooxda labaad ee ugu bartilmaameedka badan, halka iyagana ay wajaheen 136, waana kooxda shanaad ee darbooyinka ugu badan la la beegsaday.
>- Leeds ayaa sidoo kale kubbad furan ku abuurtay 103 fursad xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League, mana jirto koox fursadaha ay abuurtay ay gaarayaan saddex jiifar (100+) ka hor kulammada isbuucaan.
>- Kooxda ka dhisan Yorkshire ayaa guuleysatay saddex ka mid ah shantii jeer ee ay bannaanka ku soo ciyaareen horyaalka xilli ciyaareedkan, waxaana ay barbarreeyeen wadarta guulihii ay bannaanka kusoo gaareen guud ahaan xilli ciyaareedkii 2003-04 oo ahaa xilli ciyaareedkoodii ugu dambeeyay ee Premier League.
>- Leeds United ayaa sameyn karta inay kulankii saddexaad oo xiriir ah ay shabaqooda difaacdaan ciyaaraha Premier League markii ugu horreysay tan iyo 2002.
>- Macallin Marcelo Bielsa ayaa guuleystay saddex ka mid ah afar kulan oo ay iyagoo macallimiin ah wada ciyaareen Frank Lampard intuu uu macallinka reer England majaraha u hayay Derby fasalkii 2018-19, balse waxaa la garaacay ciyaartii nus-dhammaadka ee bug-baxda lagu soo aado horyaalka lugtii labaad ee ka dhacday garoonka Elland Road.
>- Lix ka mid ah toddobada gool ee uu xilli ciyaareedkan Patrick Bamford ka dhaliyay horyaalka Premier League waxa uu ku soo dhaliyay meel ka baxsan garoonka kooxdiisa.